Home बिचार नेपालीपनको समाजवाद !
सबै मिलेर परिश्रम गर्ने तथा उपभोग्य वस्तुमा साझा अधिकार स्थापित हुने मान्यतालाई सरल अर्थमा समाजवाद भनिन्छ । उत्पादनका साधनमा सामूहिक स्वामित्व स्थापना गर्दै ‘सबैलाई क्षमता र योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको दाम दिनुपर्छ’ भन्ने नीतिमा माक्र्सवादी सिद्धान्तले पुँजीवादको अन्त्य चाहन्छ । अर्थात्, यसमा नेपाली बाम राजनीतिको एउटा प्रमुख नारा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ को अर्थ गाँसिन पुग्छ । ‘जनवाद’ शब्दको अर्थ सामन्ती शासनको अन्त्य भएपछि स्थापित हुने जनतान्त्रिक राजनीतिक विचारमा आधारित दर्शन भन्ने हुन्छ ।
जनवादले श्रमजीवी वर्गको हितमा समानतावाद
(आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि कुनै पनि क्षेत्रमा भेदभाव नभई समानता हुनुपर्ने मान्यता) को धारलाई प्रश्रय दिन्छ । यो एउटा राजनीतिक–सामाजिक सिद्धान्त हो । यसको अर्थ पुँजीवाद, सामन्तवादलगायतको एकाधिकारको अन्त्य गर्नु हो अनि भूमि सुधारका आधारमा जनताको स्तरोन्नति पनि गर्नु हो । तर, व्यक्तिलाई समूहमा स्थापित तुल्याएर राज्यको दायित्व नै साझा अर्थमा हुनुपर्छ भन्ने समाजवादी सिद्धान्तलाई हामी कति स्वीकार गर्न सक्छौं !
अब पुँजीवाद भनेको के हो त भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पुँजीवादको अर्थ राजा र राणालाई विलासी, एकतन्त्री भनेर गाली गर्ने सिद्धान्तजस्तो मात्रै देखिन्छ । श्रम गरेर सम्पत्ति जोडेकालाई पनि पुँजीवादी भन्ने शैलीतिर हामी मोडिँदा हामीले हाम्रै परिवेश अनुकूल व्याख्या गर्नु आवश्यक छ । माथिल्लो जातले तल्लो जातलाई हेपिरहेको कुरा गरिरहँदा माथिल्लो जातका विपन्नका दशालाई छोड्नु पनि सन्तुलित व्याख्या हुँदैन किनकि जातकै आधारमा शोषक र शोषितको व्याख्या गर्ने हो भने धेरै क्षेत्री-बाहुनले पनि बनिबुतो गरेर दुःखले परिवार पाल्नु परिरहेको यथार्थ छ नै । नेपालमा यो भन्दा अलिक मास्तिर उक्लेर आजको तहमा रहेर व्याख्या गरिनु अपरिहार्य छ । यो विषय समाज–राजनीतिमा अलिक बढी ढल्कँदा धर्म राजनीति र अर्थ राजनीतिसँग मिसिएर देखा पर्छ । किनकि, हरेक इतिहासलाई सोही समयको परिवेश, परिस्थिति र बाध्यतामा आधारित भएर व्याख्या गरिनुपर्छ ।
विगतलाई दोषै मात्र देखाएर गाली गर्ने अनि आज पटक्कै सुध्रिन नसक्ने पद्धतिमा हामी सर्वहारा वर्गका सिद्धान्तलाई बोकेर नबुझ्नेका अघि ठूला कुरा गरिरहेका छौं । त्यागको अर्थ जेल, नेल र हिंसाको राजनीति मात्रै हो त † हुँदाहुँदा नेपाली प्रगतिवादी चिन्तक पनि समालोचनाभन्दा बढी समर्थनको एक किस्सामा लहसिनु पनि कतै पूर्वाग्रही र अल्पव्याख्या पद्धति पनि पटक्कै होइन !
उत्पादनका लागि पुँजीको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा स्वतन्त्र बजार र प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक प्रणालीलाई पुँजीवादी मान्यताले प्रश्रय दिन्छ । दार्शनिक माक्र्सको विचारलाई हेर्ने हो भने आर्थिक कारोबार र उत्पादनका प्रमुख साधन तथा उत्पादित वस्तुमा पुँजीपतिको व्यक्तिगत स्वामित्व हुन्छ । यो मान्यताले श्रमभन्दा पनि पुँजीलाई सर्वाधिक महŒव दिन्छ । नेपाली समाज त्यो भन्दा फरक आदर्श समाजमा बाँचिरहेको सकारात्मक पक्षलाई भुल्न मिल्दैन । तथापि, नकारात्मक धारमा आपसी विभेदलाई प्रश्रय दिएर हुर्किएका वर्गीय असमानताको जडलाई उखेल्न त हिंसाभन्दा पनि प्रेमको ओखती दर्बिलो हुने देखिन्छ ।
विभेद वा असमान वितरणका कमजोरीका बीचमा पनि मानवतावाद (मानिसले मानिसप्रति गर्ने समताभाव, दया–करुणा तथा कल्याणकारी कार्य) को एक ठूलो हिस्सा राम्रोसँग हुर्केको थियो, जुन कुरालाई माक्र्सवादी व्याख्याभित्र मात्रै समेट्न सकिँदैन । विभेद, छुवाछुत, सती प्रथा, दास प्रथालगायतका कुसंस्कारको अन्त्यसँगै यदि नेपालमा शिक्षा र चेतनास्तरलाई बढावा दिने हो भने त्यहाँ नेपालीपनको विकास सम्भव हुन्छ । विकृतिले भिन्न तरिकाले प्रभुत्व जमाएर पुस्तान्तरण हुँदा नेपाली समाजको आदर्श भावसमेत विकृतिकै कित्तामा पर्न गयो । अतः निकै मै हुँ भन्नेले नेपाली समाजलाई व्याख्या गर्दै जाँदा उदारवाद (पुँजीवादी राजनीति र आफन्तप्रति अनुरागी), नस्लवाद (मानिसलाई फरकफरक नस्ल (समूह) मानेर हेरिने अर्थात्, नश्लमा उँच र नीचको घेरो बनाएर नीच भनिएकालाई सताइने एक नाजीवादी भन्ने सिद्धान्त), फासीवाद (व्यक्तिगत सम्पत्तिको प्रभुत्ववाद वा सर्वसत्तावाद) आदिको पश्चिमी सोचकै तहमा मात्र रहेर हेर्ने गरेको देखिन्छ । नेपाली समाजको मिहिन अर्थ–संस्कृति र बन्धुत्वमैत्री सामाजिकीकरणलाई भुल्न मिल्दैन । परिणामतः नेपाली समाजवादभित्रको ‘आदर्श मानवतावादी समतावाद’ लाई बिर्सेर गरिएको पश्चिमी पद्धतिको व्याख्यामा आज हामीले आफ्नोपनको अस्तित्वलाई कुल्चिरहेका त होइनौं ?
बहुजाति, बहुभाषी र बहुसांस्कृतिक समाजभित्रको एकतालाई बिर्सेर झुन्ड–झुन्डको राज्य प्रदान गर्ने नीतिचाहिँ भोटका लागि फालिएको कूटनीतिक अस्त्र मात्रै हो ।
पुँजीवादको अन्त्य समाजवाद हो भने समाजवादको पूर्ण विकसित अवस्थालाई साम्यवाद भनिन्छ । माक्र्सवादी सिद्धान्तमा पूर्ण मानवीय समानतायुक्त वर्गविहीन, शोषणविहीन र राज्यविहीन स्थितिको परिकल्पनालाई साम्यवादले समाजलाई चलाउन चाहन्छ । साम्यवादी मान्यतामा लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, पार्टी, नेताविहीन मान्यताले व्यक्तिवादको अन्त्य हुँदा वर्ग संघर्षको समेत अन्त्य हुन्छ भन्ने मान्यता छ । हाम्रो समाज र मुलुकले यो धारलाई कसरी ग्रहण गर्ला ? हाम्रा प्राज्ञिक अनुसन्धेय, व्यावहारिक नैतिक, मानवतावादी, सुरम्य शान्तिमय पद्धतिलाई समेत बिर्सिन खोजेर गल्ती गर्दै त छैनौं † के आजका सभ्य र शिक्षितका व्याख्याभित्र नेपालीपन पनि समावेश भएको छ त ? यो एउटा अहं सवाल हो †
यो पनि पढ्नुहोस रेमिटेन्स वृद्धिले पलाएको आशा
माक्र्सवादी मान्यतालाई प्रश्रय दिएर नेपालमा कम्युनिस्ट शासन (कम्युनिज्मका अनुयायी) को जग बसाल्ने काम वि.सं. २००६ मा पुष्पलालद्वारा भयो । पार्टी उदाएको ६८ वर्षपछि बल्ल नेकपाले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने सौभाग्य पाएको हो । अहिले भइरहेको विवादास्पद अवस्थालाई हेर्ने हो भने यो गरिमा जोगाउने आस्थाको धरोहरमा नराम्ररी खिया लागेको छ । यसमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेको दोष हुनेछ किनकि अहिले पनि स्वार्थका लागि शक्ति र सत्ताको सिँगौरीमा होमिएको प्रस्ट छ । मौकामा चौका मार्न लम्कने उमेदवारको लामै लर्को देखिन्छ । अहिलेको सरकारले प्रदर्शन गरिरहेको व्यवहार अनि अर्कोतिरको जनआक्रोस र वितृष्णाको बाढी दुवै कुरालाई सल्टाउन सत्ताधारी नै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
माक्र्सको युरोपमुखी घोषणापत्रभित्र नेपालको माटो नमिल्नु अचम्म हुँदै होइन । वर्ग संघर्षद्वारा समानताका लागि रक्तपातलाई समेत स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने माक्र्सको विचार नेपाली भूमिका लागि कदापि स्वीकार्य होइन । हामी त क्रान्तिले भन्दा शान्तिले समानता र साम्यवादभन्दा मास्तिरको मानवतावादमा रम्न चाहने माटोमा हुर्केका छौं । सबाल्टर्नको अवधारणासम्मका लागि पनि हाम्रो समाजले शान्तिपूर्ण चैतन्यलाई अघि सारेर चाहेको परिवर्तन गराउन सक्छ । यस अवधारणाले मात्रै आवाजविहीनका आवाज बोल्न सक्छ, सदियौंदेखि पिछडिएकाहरूको दशालाई बोलिदिने बाटो खुला हुन सक्छ । आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, राजनीतिक तहमा समेट्ने भन्दै गर्दा फेरि छोडिरहिएका भुइँमान्छेको आवाजलाई बुलन्द गर्न सक्छ ।
हाम्रा लागि त बुद्धको सिद्धान्तविपरीत रक्तपातपूर्ण क्रान्ति अफापसिद्ध हुनेछ र त्यो दिगो हुनेछैन । हो, जनताको मनमा शोषक र शोषितको व्याख्या गर्ने र सोच्ने बुद्धि माओवादी द्वन्द्वदेखि अलिक बढी नै अगाडि आयो । यो हत्या, हिंसा, विनाशले निम्त्याएको त्रास, वेदना, संवेदनहीनताको जर्जर अवस्थाभित्र पनि विकसित भएको एउटा सकारात्मक पाटो हो । यो एक हदमा चेतना स्तर वृद्धि गराउने झिनो इतिहासचाहिँ हो तर चेतनास्तर बढाउने मूल धार भनेको सूचना र सञ्चारलाई प्रविधिले बढावा दिने परिवेश नै बढी हो । अर्को तहसम्ममा पुगेपछि बहुजाति, बहुभाषी र बहुसांस्कृतिक समाजभित्रको एकतालाई बिर्सेर झुन्ड–झुन्डको राज्य प्रदान गर्ने नीतिचाहिँ भोटका लागि फालिएको कूटनीतिक अस्त्र मात्रै हो । यो सोचले नेपाली समाज अनुरूपको समाजवादी मान्यताभित्र विकसित हुनुपर्ने अपनत्वको स्तरलाई स्वार्थको झुन्डमा लगेर धकेलिदियो । तब ‘मानवतावादी समतावाद’ भन्दा तल झरेर एक किसिमको आन्तरिक कलह र दलदलभित्र ‘साम्प्रदायिक खेमा’ को जालो बुनियो । एक हदमा यो कूटनीति तत्कालीन माओवादीका महारथीलाई नै भारी हुन पुगेको देखिन्छ । यही जालोमा लगेर अल्झाइएका विचारमाथि विश्लेषण हुँदा संघीयताको अवधारणामा नै शंका उब्जन थालेको हो तर संघीयता राम्रो हुँदै गर्दा व्यवहार गलत भएको हो ।
नेपालका लागि समतावाद र समाजवादी मानवतावादको सिद्धान्तको प्रयोग मात्रै बढी सान्दर्भिक हुने देखिन्छ ।
अलिकति नेपाली राजनीतिको कोणबाट हेर्ने हो भने क्रान्तिको व्याख्यालाई व्यावहारिक रूप दिनुपर्ने व्यक्तित्वमा नै आन्तरिक खिचातानी प्रस्ट देखियो । आज त्यो सबल पार्टी नै धुजाधुजा भएर तितरवितर भएको छ । यो पदीय बाँडफाँटमा सत्ताको महत्तालाई बिर्सेको कारुणिक इतिहास हो । हालको राजनीतिक माहोलमा वाम संयोजनको विषय प्रस्ट छ । यसमा क्षमता र भविष्य हेरिएन बरु ६०–४० को भागबन्डा मिलनविन्दु बन्न पुग्यो । तन मिलेको देखिए पनि मन नमिलिइरहेकाले बाम राजनीतिको ध्रुवीकरण उही पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेकै कोणबाट, टाउके नेताको खातिरदारी गर्नेकै धारमा गएर ठोक्किएको छ । यसले न माओत्सेतुङको विचारलाई बुझ्छ न त एंगेल्सको मान्यतालाई नै । सिद्धान्त र व्यवहारमा देखिने फासलाले पारदर्शिता र गुणस्तरलाई क्षीण तुल्याइदिएको छ । अहिले न त माक्र्सको समाजवाद प्रस्ट छ न त जननेता मदन भण्डारीको जबजको सिद्धान्त नै । फलतः क्षमतावान्लाई पाखा लगाइयो र ‘हाम्रोभित्रको हाम्रो’ खोज्दा ‘राम्रोभित्रको राम्रो’ लाई गलहत्याएर पाखा लगाएको कुरा छर्लंग देखिन्छ ।
आखिर रक्तपातमुखी हतियारको क्रान्तिले देशको ठूलो जनधनको क्षति गराएपछि परिणाममा बाध्यकारी सहमति गराउने रहेछ । माओले त आफ्नो देश सुहाउँदो क्रान्ति गरे । कार्ल माक्र्सले युरोपेलीहरूको जागरणको एउटा क्रमलाई बोल्दै गर्दा अर्थात् फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको प्रभावले कमाउ धन्दामा लहसिएका मानिसका लागि भनेर आफ्नो विचार राखे । तथापि, क्रान्तिको निष्कर्ष पनि केवल शान्ति बाहेक अरू केही हुँदै होइन । क्रान्तिको बाटोबाट कदापि नेपालीपनको समाजवादमा झाँगिन सक्ने अमूल्य मानवतावाद सम्भव हुँदैन । ‘मानवतावाद’ नेपालीको आफ्नोपना हो जुन साम्यवादभन्दा निकै बलियो हुन्छ । अतः नेपालका लागि समतावाद र समाजवादी मानवतावादको सिद्धान्त मात्रै बढी प्रयोग सान्दर्भिक हुने देखिन्छ ।
रमेश तिमलसिना - July 9, 2020
राजनीति सुभाष साह - October 12, 2020
प्रदेश विश्वनाथ सिम्खाडा - June 13, 2020
प्रदेश ३ प्रशान्त वली - May 16, 2020